एलसीडी सेन्ट पीटर्सबर्ग मा "अलेक्जेन्डर Nevsky": वर्णन, योजना, विकासकर्ता र समीक्षा
जो एक ठूलो खुला हावामा संग्रहालय प्रसन्न र आश्चर्य गर्न सक्षम, सेन्ट पीटर्सबर्ग। अब यहाँ मात्र पराउँछु गर्न सक्छन् जो, तर बस बस्न रुचि अर्को बिन्दु, त्यहाँ छ। हामी grandiose आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" बारे कुरा गर्दै छन्, 2012 देखि शहर adorns। यो पृथ्वी हो ठ्याक्कै 126 मीटर जो को टिप एउटा घरको छानो र एसपायर, एक घर छ। मिति, सेन्ट पीटर्सबर्ग को उच्च-वृद्धि भवन बीच ", को टावर को नेता" दोस्रो ई.पू. पछि सबै भन्दा ठूलो छ तर यो पक्कै पनि आवासीय गुण बीचमा नेता छ। अरू के, उचाइ, विभिन्न जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" बाहेक? उहाँलाई आफ्नो खुसी homeowners द्वारा जीवन कस्तो छ? यो सम्भव आज यहाँ सम्पत्ति किन्न, र के मूल्य छ? यस लेखमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ।
दायाँ आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" को निर्माण को लागि दिग्गज Neva चुनिएको विकासकर्ता को बैंकहरू मा सेन्ट पीटर्सबर्ग को Nevsky जिल्ला महिमित शहरमा सुन्दर ठाउँ। निर्माण №138, संभावना Obukhov रक्षा: वस्तुको ठेगाना सम्झना गर्न सजिलो छ। नजिकैको मछुआरे गरेको एवेन्यू बस 770 मिटर टाढा शहर घन्टी सडकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यातायात धमनी छ, र। एलसीडी को ठूलो फाइदा उहाँबाट कार द्वारा 7-8 मिनेट घडी गर्न लागि Neva मार्फत केबल-बसे पुल चालु भन्ने तथ्यलाई छ। यसलाई स्पष्ट जटिल को Windows देखि देख्न सकिन्छ। एलसीडी निकटतम छिमेकी दुर्भाग्यवश, यो एक विशेष लोकप्रिय क्षेत्र Murzinka र धेरै उच्च वृद्धि आवासीय भवन,916 फर्श देखि भइरहेको छ, ऐतिहासिक, तर।
एलसीडी "अलेक्जेन्डर Nevsky" प्रमुख परिवहन धमनिहरु र शहर को हब नजिक erected थियो। को बाटो मा, भवन मात्र 50 मीटर minibuses र बसें (19 मार्गहरू) को एक स्टप छ। 120 मीटर टाढा ट्राम रोक्न №№24 र 27 को जटिल देखि2किलोमिटर अर्धव्यास हो "Obuhovo" र "मत्स्य पालन" मेट्रो स्टेशन र एउटै नाम रेल स्टेशन बन्द गर्नुहोस्। घ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, परिसर नजिकै सार्वजनिक यातायात plying पर्याप्त भन्दा बढि छ।
चालक एलसीडी पनि सुविधाजनक स्थान को लागि। को सूचीपत्र अनुसार यस Obukhov रक्षा , तिनीहरूले रिङ रोड वा Shlisselbourg सूचीपत्र गर्न एक मिनेट domchali मा, साथै कुनै पनि समयमा चाँडै पुल मा Neva नदी को अन्य बैंकमा अगाडि बढ्न सक्छ।
वातावरण को शुद्धता को दृश्य को बिन्दुबाट, यो एलसीडी "अलेक्जेन्डर Nevsky" को एक दोहरी स्थिति छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग, पर्यावरण मूल्यांकन सबै प्रदूषित शहर बीच रूस "आदरणीय" तेस्रो स्थान मा लिन्छ। तसर्थ, यसको पारिस्थितिक वातावरण कुनै पनि क्षेत्रमा छैन सुरक्षित र सवारी उत्सर्जन contaminating मुख्य रूप हावा छ।
हेरिएको आवास जटिल पनि किनभने यो दुई पक्षको बीचमा स्थित छ, यो समस्या बाट ग्रस्त छ। टाढा 25 मीटर देखि मछुवा शरीर र यो Obukhov रक्षा सूचीपत्र मा केन्द्रीय र congested मात्र 15 मीटर को एक।
अर्को बेफाइदा ग्यास स्टेशन, निरन्तर कार मा भनिएको छ जो 22 मीटर मा एलसीडी, मा स्थित सकिन्छ। यो आशावाद र औद्योगिक क्षेत्र, को दरवाजे मा जो गर्न जटिल, बरु केवल 80 मिटर दिन छैन। यो केवल ट्राम ट्रयाक बाहिर स्थित छ।
तर अर्कोतर्फ, एलसीडी भएको Neva को बैंकहरू देखि सिर्फ 100 मीटर बनाए। क्षेत्र पनि सँगै माछा मार्ने को प्रशंसक ल्याउँछ जो एक स्थानीय विचरण, छ। त्यहाँ नदी नजिकै एउटा सानो निकुन्ज को "स्पार्टाकस" पार्क मा सजिलै blending छ। यी प्राकृतिक वस्तुहरू अलिकति परिसर वरिपरि वातावरण सुधार।
यो जटिल पूर्वाधार
सबै बुरा एलसीडी यहाँ निर्माण गर्ने पूर्वाधार कवर भन्दा बढी "अलेक्जेन्डर Nevsky"। घर इलाका परिसर को सानो छ, तर विकासकर्ता एक विशाल घेरेदार आंगन खेल मैदान मा राख्न व्यवस्थित छ। पनि साइट मा स्थित 214 कार को क्षमता र बहु-जमीन पार्किंग दुई-स्तर भूमिगत पार्किङ निर्माण गरिएको छ। को पूर्वाधार बाँकी जमीन तल्ला मा भवन भित्र स्थित छ। यहाँ 3000 मिटर 2, छोराछोरी, बेकरी, रक्सी स्टोर, फार्मेसी,2क्याफे, अलेक्जेन्डर Nevsky Lavra आफ्नो भाग अन्तर्गत लिए कि मन्दिरमा adjoining पनि घरहरू लागि निःशुल्क सांस्कृतिक केन्द्र को पूल क्षेत्र पौडिरहेका, एक फिटनेस सेन्टर संचालित। परिसर मा गैर-आवासीय परिसर अन्तर्गत सबै 16 860 वर्ग मीटर पाए।
एलसीडी "अलेक्जेन्डर Nevsky" लामो पहिले महारत र Inhabited क्षेत्रमा बनाइएको थियो। निकटतम डेली टाढा 50m निकटतम किंडरगार्टन 150 मीटर, अर्को 200 मीटर स्थित। बस 400 मीटर एलसीडी टाढा एक अर्धव्यास भित्र, तपाईं एक सना, एक प्रहरी चौकी, वेब डिजाइन स्टुडियो पाउन सक्नुहुन्छ, मर्मत संलग्न निर्माण कम्पनीहरु अपार्टमेन्ट र औद्योगिक चढाई, बैंक, छोराछोरीको कपडा पसल, स्टूडियो, दन्त क्लिनिक मा काम गर्छ। एक ठूलो सुपरमार्केट "Lenta" निर्माण एक सानो थप गर्न र म्याकडोनाल्ड गरेको र जटिल दुई रोक्दछ टाढा त्यहाँ पनि एक किंडरगार्टन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चार ठूलो सुपरमार्केट छन्। हामी घन्टी सडक तिर दिशा विचार भने, एलसीडी देखि 550 मीटर खेल जटिल "Obukhovets" दुल्हन सैलून, स्वास्थ्य केन्द्र र फिनल्याण्ड मा बसें को प्रस्थान बिन्दु अवस्थित छ।
परिसर को डिजाइन
एलसीडी सेन्ट पीटर्सबर्ग मा "अलेक्जेन्डर Nevsky" भवन द्वारा अधिक लिएको र शहर को परिदृश्य मा प्रवल भयो छ जो पहिलो आवासीय गगनचुम्बी भवन, थियो। यो जटिल एक Trisected भवन फर्श 37 (जमीन 35 र दुई भूमिगत) छ। यो जटिल डाली-फ्रेम प्रविधी मा बनाइएको थियो। बाहिरी पर्खाल गर्मी-बिछाउने पत्र संग इँटा बनेको छन्। बालकनी ग्लाजिंग परिसर प्रकार दिन्छ कि Tinted ग्लास प्रयोग गरे विशेष प्रभावकारी हुन्छ। सबै entrances मा प्रवेश क्षेत्रमा यसको भित्ताहरू Aleksandra Nevskogo र दर्पण चित्रहरूले संग सजाया छ, विशाल छन्। भवन फिनिस चिह्न 17 लिफ्टहरु KONE सेट, पर्याप्त विश्वसनीय मानिन्छ। भाडादारों को परिधि वरिपरि राखिएको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा, र हरेक खण्डमा काम concierges प्रदान गर्नुहोस्।
एलसीडी "अलेक्जेन्डर Nevsky": योजना
यो जटिल अपार्टमेन्ट को निम्न विभाग निर्माण:
- स्टूडियो, कुल क्षेत्र (एस) छ जो 24 मिटर2देखि 30 मिटर 2;
- एउटा कोठा (एस 34 देखि = गर्न 41 मिटर2मिटर 2);
- डबल्स (एस = 50 मिटर280 मिटर 2);
- बेडरूम (एस = 77 मिटर2देखि 104 मिटर 2);
- द्वैध अपार्टमेन्ट (एस = 250 मिटर 2)।
सबै अपार्टमेन्ट मनोरम Windows, माथिल्लो फर्श मा, तपाईं शहर को परिदृश्य पराउँछु गर्न सक्छन् जो को संग सुसज्जित छन्, र मध्य फर्श मा - Neva को परिदृश्य।
डिजाइनर द्वारा सिर्जना अपार्टमेन्ट रूपरेखा आधुनिक मानिसको आवश्यकता अनुरूप। यस स्टूडियो साथै, प्रत्येक घर आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" छुट्टै स्नान र शौचालय छ। वर्गहरूको यहाँ 12 वर्गहरूको, hallways द्वारा भान्सा -5वर्गहरूको छत उचाइ 2.7 मीटर को (उपकरणहरू वा निलम्बित संरचना tensioning बिना), बालकनी तथा balconies एक गैर मानक आकार छ।
परिसर आवास निर्माण को सुरुमा प्रति 1 मिटर275 र 000 को बीच एक मूल्य मा बेचिएको छ। अब आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" मा एक घर मांग मा अझै पनि छ, तर तिनीहरूले मात्र दोस्रो घरमा रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ। धेरै बजार मा प्रदान गर्दछ। मूल्यहरु मालिक द्वारा सेट छन्। औसत मा, उनि एक स्टूडियो लागि 3.1 मिलियन मा सुरु गर्नुहोस्। सुरुमा अपार्टमेन्ट राम्रो समाप्तिको साथ भाडामा थिए, यो कवर, गरे पर्खालहरु plastered, बिजुली केबल र संचार को लेआउट गरिएको छ। अब अपार्टमेन्ट केही, बिक्री को लागि, एउटै राज्य जारी, तर ती सबै भन्दा पहिले नै मरम्मत गरेका छन्। बंधक जारी एक पटक वा बचत बैंक मा मा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न, एलसीडी मा एक घर खरीद हुन सक्छ।
विकासकर्ता को विश्वसनीयता
सेन्ट पीटर्सबर्ग कम्पनी "Rosstroyinvest" मा विश्वसनीय र लोकप्रिय आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" विकासकर्ता थियो। यसको बारेमा प्रतिक्रियाहरू धेरै राम्रो हो। भवन सेवाहरूको रूसी बजार मा त्यो 2001 मा बायाँ, र त्यो समयमा सफलतापूर्वक 30 वस्तुहरु भन्दा बढी सञ्चालन हालिदिए छ। कम्पनी स्पेन मा निर्माण बजार विकास छ 2016 देखि, केटालोनिआ मा घरहरू निर्माण गर्न थाले। एक डिजाइन ब्यूरो, निर्माण कम्पनीहरु, सामाग्री र उपकरण, मर्मत सेवा आपूर्तिकर्ता, अधिक हस्तान्तरण गर्ने वस्तुहरु मा सञ्चालन: मिति, "Rosstroyinvest" 10 कानूनी संस्थाहरू समावेश एक सम्बद्धता छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग को अधिकारीहरु कम्पनी "Rosstroyinvest" पहिले आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" छ जो एक गगनचुम्बी भवन निर्माण को लागि जारी परमिट छ। शहर मा माटो एक जटिल संरचना छ किनभने यो कार्य, एकदम गाह्रो छ। उत्खनन, जग र परियोजनामा दिगो भवन को रूपरेखा डिजाइन को लागि geologists, सर्वेयर, हाइड्रोलिक ईन्जिनियरहरु, संरचना को बल वृद्धि गर्न प्रविधिमा संलग्न बोलाइयो। निर्माण गतिविधिहरु को निर्माण को अन्त पछि सबै nuances प्रदान र जटिल को भाडादारों उच्च सुरक्षा प्रदान गर्न आगो विभाग को सहायता संग ल्याइनेछ थिए। मात्र पछि यो वस्तु सञ्चालन हालिदिए थियो।
भाडादारों को समीक्षा
धेरै नागरिक र शहर को अतिथि, परिसर बितेका ड्राइभिङ यसको वास्तुकला फारामहरू र स्टाइलिश, आधुनिक, अझ विभवयुक्त डिजाइन प्रशंसा। र तिनीहरूले सेन्ट पीटर्सबर्ग, भाडादारों को एक ल्यान्डमार्क भयो जो आफ्नो सुन्दर घर, के लाग्छ? आवासीय जटिल "अलेक्जेन्डर Nevsky" अस्पष्ट समीक्षा। अरूलाई यो एकदम समस्याग्रस्त फेला गर्दा केही homeowners, तपाईंको एलसीडी पुजा गर्नु। अवलोकन लाभ:
- शानदार दृश्य, आफ्नो शहर मा गर्व गराउँछ जो;
- सडक junctions र रोक्दछ को निकटता;
- यो जटिल र यसलाई वरिपरि धनी पूर्वाधार;
- विंडोज देखि भव्य दृश्य;
- राम्रो आपराधिक कोड, जटिल को कार्यका लागि जिम्मेवार, तेजी समस्या, अर्डर कायम समाधान।
- धेरै सानो पार्किङ क्षेत्र;
- यो जटिल वरिपरि निरन्तर धेरै कार (र आफ्नो ग्याँस स्टेशन आउने);
- अपार्टमेन्ट गरिब इन्सुलेशन, ड्राफ्ट, पनि साथ Windows बन्द;
- यो जटिल लागि ठाउँ किन यार्ड मा सधैं धेरै बलियो हावा छ जो हावा प्रवाह, को कोलाहल बाहेक चयन गरिएको छ (gusts शाब्दिक तल घचघच्याउनुहुन्छ छन्)।
एलसीडी "एम्बर" (वोरोनिश): एक आवासीय परिसर अपार्टमेन्ट
स्वामित्व को दर्ता लागि राज्य कर्तव्य
कसरी र के चार्टर गर्न सकिन्छ
म छात्रावास को निजीकरण मा एक कोठा चाहिन्छ?
नयाँ Koroleva: सूची, वर्णन, मूल्य
को रंग Boulevard मा पशु चिकित्सा क्लिनिक: समीक्षा
घर 10 10: काठ र ईटा को योजना
रूपमा हाल तेल व्यापार? तेल मूल्य विदेशी विनिमय बजार प्रभावित?
गैंडा ( "Marvel"): मूल, क्षमता र चरित्र शत्रुहरू
स्तम्भ मार्शल: सर्वश्रेष्ठ मोडेलहरूको समीक्षा
को VAZ-2114 मा ब्रेक डिस्क पछिल्लो: आफ्नै हात को प्रतिस्थापन
आफ्नो हात छुट्टी शरद सुट शरद ऋतु लागि तयार
प्रेमको मानिसको संकेत
MAZ-530: सृष्टिको इतिहास, प्राविधिक विनिर्देशों
कोमल र स्वादिष्ट - साथ मशरूम pies
कसरी कराइ मा तारेको माछा पकाउन गर्न? phased नुस्खा